ႏွမ္းနက္နည္းပညာကို ႏွစ္ဘီးတပ္ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီးေနာက္ သိန္းတစ္ရာတန္ Xiaomi ေကာ္မဲကို - Pandaily
နှမ်းနက်နည်းပညာ (ခေါ်) BST. AI ဟာ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Chip နဲ့ platform တွေကို တွက်ချက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်နေတဲ့ နည်းပညာကုမဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှစ်ဘီးတပ် ဘဏ္ဍာငွေ အပြီးသတ် ကြေညာမည်Strategic wheel နဲ႔ C wheel financing ေပါ့။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ တန်ကြေးရှိ မဟာဗျူ ဟာဘီးနှင့် C ဘီးတို့ နီးကပ်လာပြီးနောက် ယခုအခါ တရားဝင် “Beautiful Boy” ဖြစ်လာပြီဟု BST. AI က ပြောသည်။
နှစ်ဘီးတပ် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းခြင်း၊ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့အပြင် ၎င်း၏ မျိုးဆက်သစ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး၊ စီးပွားဖြစ်မောင်းနှင်မှု ပလက်ဖောင်းများကို အလိုအလျောက် လွှမ်းမိုးထားသည်။
သည်မဟာဗျူဟာထဲမှာ ဘီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေထဲမှာ Hubei ပြည်နယ်က Xiaomi Jiangi Industry Investment Fund Management Limited, Fulko Car Electronic Co., Ltd စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
C wheel က ဦးဆောင်မဲပေးရာတွင် Hubei မှ Xiaomi က ယန်ဇီမြစ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ပြီး၊ Voting ပါတီတွင် South Ko Technologies, SummitView Capital, Futurex Capital စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
သည်ကုမဏီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သည်နှစ်မှာ ပြီးစီးခဲ့တဲ့ North Aurora Circle ကနေ ရန်ပုံငွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ A+ Wheel Financing ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုတကြိမ်မှာတော့ ယွမ် သန်း ၁၀၀ နီးပါး (၁၅၄၆.၄ သန်း) တန်ဖိုးရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ BST. AI က ထုတ်ပြန်တဲ့ ပြည်တွင်းပထမဆုံးကားစည်းမျဉ်းမှာ Smart Driving Chip ကို ဟွာနင်းနံပါတ် A500 နဲ့ 0-10 Tops/s တွေကို အပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်ကုမ္မဏီက ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Chip Hop ကို မိတ်ဆက်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ Hill One A100,161 Tops/s ကို ရောက်ရှိဖို့ တွက်ချက်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပါတယ်။ ဒါဟာ တရုတ်ရဲ့ပထမဆုံး L2+Auto မောင်းနှင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Chip ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းတရုတ်ကားတင် ပို့မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ကမ္ဘာ့ချစ်ပ်ပြားရှားပါးမှုကို ဘယ်လိုရှောင်ကြမလဲ? အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုက တုံ့ပြန်ခြင်း
အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ဘီးဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းဟာ Xiaomi ရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ အမာခံချစ်ပ်တွေကို တပ်ဆင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ချီတက်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အခုလို ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကို စတင်တည်ဆောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ Xiaomi က စမတ္လွ်ပ္စစ္ကား လုပ္ငန္းသို႔ ခ်ီတက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ယြမ္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။